Project Parking နှင့် Workspace မှကိရိယာများသည်သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလွယ်ကူစေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Project မှကားရပ်ရန်နှင့် Workspace ကို Tools များသိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုရိုးရှင်း
Project မှကားရပ်ရန်ဒိုင်ခွက်, workgroup functionality နဲ့ Nearline ကားရပ်ရန်၏ပစ်လွှတ်ပေါင်း Fotonflite လုံခြုံ Point-to-point လွှဲပြောင်းစနစ်က: NAB 2019 များအတွက် Marquis အသံလွှင့်ကနေနယူး
နယူး Project မှကားရပ်ရန်ဒိုင်ခွက်
Marquis အသံလွှင့်ရဲ့ လွန်စွာလိုလားသော ပလက်ဖောင်းလက်မှတ် Project မှကားရပ်ရန် tool ကိုများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းရွှေစံနှုန်းဖြစ်ပြီး လွန်စွာလိုလားသော သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စီမံကိန်းသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ, စီမံကိန်းကို analytics, visualization, စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်သိမ်းဆည်းပေး။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဒေတာအသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်ဖို့ကူညီပေးနေ, Multi-site ကိုကုမ္ပဏီများအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သောအရာ, Marquis Workspace ကို Tools များနှင့်စီမံကိန်းကားရပ်ရန်စနစ်များများအတွက်အသုံးပြုမှုခြေရာခံခြင်းအားဖွင့်အသစ်တစ်ခုဒိုင်ခွက်အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ update လုပ်လျက်ရှိသည်။ Project မှကားရပ်ရန်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းလည်းများအတွက်ချောမွေ့စွာစီမံခန့်ခွဲမှုပို့, S3 AWS Server-side encryption ကိုထောက်ခံကြောင်းထပ်ပြောသည် လွန်စွာလိုလားသော ISIS အဖွဲ့သို့မဟုတ် NEXIS သိုလှောင်မှု။ ထို့အပြင်မှာ, မျိုးစပ်သောမိုဃ်းတိမ်တိုင်ထုတ်လုပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချရန်ကူညီပေးနေ, အမေဇုံ Glacier cloud storage ကနေပြန်လည်ရယူခြင်းများအတွက်ထောက်ခံမှုပေးသည်။
Project မှကားရပ်ရန်ရဲ့အသစ်ဒိုင်ခွက်တက်ကျောထောက်နောက်ခံသို့မဟုတ် Workspace ကို Tools များနှင့်စီမံကိန်းကားရပ်ရန်အပါအဝင် Marquis အသံလွှင့်၏ဆော့ဖ်ဝဲ application များ, အသုံးပြု. တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ site မှာမော်ကွန်းတင်ခံရမယ့်ဒေတာပမာဏစောင့်ကြည့်ဖို့ Multi-site ကိုအဆောက်အဦမှာဖောက်သည်များခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအစမိဘမဲ့များနှင့်ထပ်ဖယ်ရှားရေးစစ်ဆင်ရေး၏ရလဒ်များကိုအတူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ site မှာ Project မှကားရပ်ရန်မှတဆင့်သိုလှောင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစစ်ဆေးဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများအလားအလာလိုအပ်သောသိုလှောင်မှုနေရာ terabytes ရာပေါင်းများစွာချွေတာ, အားလုံး၎င်းတို့၏တည်နေရာကိုဖြတ်ပြီးသူတို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံကူညီပေးသည်။
သင်မှန်မှန် Project မှကားရပ်ရန် run မနေခဲ့လျှင် ", သင်သည်သင်၏၏ပတ်ပတ်လည် 20% ဖြုန်းစေခြင်းငှါ လွန်စွာလိုလားသော ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရာ NEXIS စနစ်, "ဟုပေါလုသည် Glasgow, မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Marquis အသံလွှင့်ကရှင်းပြသည်။ "စီမံကိန်းကားရပ်ရန်ရဲ့အသစ် dashboard ရဲ့ feature ကုမ္ပဏီများသည်မြေတပြင်လုံးစစ်ဆင်ရေးအတွက် Workspace ကို Sync ကိုသို့မဟုတ် Backup ကိုသို့ဝါဒဖြန့်ထပ်နှင့်မိဘမဲ့မီဒီယာမှကာကွယ်ရန်လိမ္မာပါးနပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့်, ထိရောက်စွာ running ကြောင်းသေချာစေရန်ခွင့်ပြု, ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာအသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-ကျယ်ပြန့်မြင်ကွင်းပေးပါသည်။ ဤသည်ကိုလည်းအချိန်အရေးပါထပ်တူပြုခြင်း backup လုပ်ထားနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအရှိန်မြှင့်နေတုန်းသိုလှောင်မှုသိသာထင်ရှားသောပမာဏကယ်တင်တော်မူ၏။ "
Project မှကားရပ်ရန်နှင့်မော်ကွန်းတိုက်ကားရပ်ရန်အဘို့အ Workgroup လုပ်ဆောင်ချက်ကို
Marquis ကားရပ်ရန်နှင့်မော်ကွန်းတိုက်ကားရပ်ရန် Project မှ workgroup လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးသူအတွက်သို့မဟုတ်တူညီသောသုံးပြီးမျိုးစုံဘဏ်ဍာရှိသည်သောအကြီးစားကုမ္ပဏီများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော သိုလှောင်မှု။ ဒါဟာလျှို့ဝှက်သေချာစေရန်သတ်မှတ်ထားကွဲပြားခြားနားသော access ကိုအခွင့်ထူးနှင့်အတူ, တူညီတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစနစ်အတွင်းဖိုင်သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၏အတော်ကြာသီးခြားဖြစ်ရပ်ရှိနိုင်သည်ကိုဆိုလိုတယ်, အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည့်အခါအတူတူမျှဝေကွဲပြားခြားနားသောဘဏ်ဍာရှိစေခြင်းငှါ လွန်စွာလိုလားသော သိုလှောင်မှု။
အဘို့အ Nearline ကားရပ်ရန် လွန်စွာလိုလားသော NEXIS | E5 NL သိုလှောင်မှုစနစ်များ
လွန်စွာလိုလားသော မကြာသေးမီကဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော NEXIS | E5 NL တစ် petabyte-စကေး nearline post ကိုထုတ်လုပ်မှုသိုလှောင်မှုစနစ်။ ရိုးရှင်းဖို့ လွန်စွာလိုလားသော | E5 NL စီမံခန့်ခွဲမှု, Marquis ထုတ်ကုန်များ၏လက်ရှိကားရပ်ရန်မိသားစုသို့ Nearline ကားရပ်ရန်ဟုခေါ်အဖော်ဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာချောမွေ့စွာနဲ့လျင်မြန်စွာ nearline ဖို့နဲ့ကနေကူးယူ, လုံလုံခြုံခြုံဖြစ် NEXIS / ISIS အဖွဲ့တွင်အွန်လိုင်းစီမံကိန်းများကိုဖွ လွန်စွာလိုလားသော Nexis | E5 NL ။
ထူးခြားတဲ့ဒေတာ analytics အသုံးပြုခြင်း, Nearline ကားရပ်ရန်သမားရိုးကျဖိုင်လှုပ်ရှားမှု applications များနှင့်အတူတွေ့ရှိရအခြေခံလုပ်ငန်းလည်ပတ်အမှားအယွင်းများအတော်များများအောင်မြင်သော။ ပထမဦးစွာ Nearline ကားရပ်ရန်ဆိုစီမံကိန်းများကိုမှကူးယူကြောင်းသေချာ လွန်စွာလိုလားသော | E5 NL အမြဲပြည့်စုံဖြစ်ကြသည်။ ဒုတိယအကြောင့်လည်းထူးခြားတက်ကြွစီမံကိန်းကြောင့်ရည်ညွှန်းမဟုတ်ကြောင်းစီမံကိန်းကိုမီဒီယာလှည်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ Nearline ကားရပ်ရန်လည်း analytics-based Project မှကားရပ်ရန်သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပြည့်အဝ upgrade ဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံ Point-to-point လွှဲပြောင်းစနစ်က Fotonflite
Fotonflite များအတွက် high-performance ကို, လုံလုံခြုံခြုံ, 'On-the-fly' Point-to-point လွှဲပြောင်းစနစ် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer စီမံကိန်းများနှင့်မီဒီယာထားတဲ့ workspace တွေကို။ ၎င်းသည်အဆိုပါစီမံကိန်းကားရပ်ရန်အတွင်း option ကိုနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ Workspace ကို Tools များမိသားစုအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ဖိုင်များအရင်းအမြစ်အကြားပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့ခွင့်ပြု လွန်စွာလိုလားသော NEXIS / ISIS အဖွဲ့စနစ်များနှင့်ပစ်မှတ်သိုလှောင်မှုအမျိုးအစားများအကွာအဝေးအပါအဝင် လွန်စွာလိုလားသော, ယေဘုယျနှင့်စီးပွားဖြစ်သိုလှောင်မှု, သူတို့ကဒေသခံဖြစ်လျှင်အဖြစ်ဝေးလံခေါင်သီသောဆာဗာ configured ခံရဖို့ခွင့်ပြု။
Fotonflite တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်မှ၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည် လွန်စွာလိုလားသော အထူးသဖြင့်တိုက်ရိုက်အတူ ISIS အဖွဲ့ / NEXIS စနစ်များ, လွန်စွာလိုလားသော အလုပ်လုပ်-In-တိုးတက်မှုကို။ ဥပမာအားဖြင့်, Pinewood, ဗြိတိန်အကြားနှင့် - ဒါဟာလုံလုံခြုံခြုံအင်တာနက်ကျော်ထုတ်လုပ်မှုစင်တာများချိတ်ဆက်မှုအတွက်စံပြဖြစ် ဟောလိဝုဒ်, ယူအက်စ်အေ။ Fotonflite လည်းအဆင့်မြင့်ကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေ လွန်စွာလိုလားသော ပထမဦးဆုံးလွှဲပြောင်းပြီးနောက်မှသာနောက်ပိုင်းစီမံကိန်းနှင့် Workspace အပြောင်းအလဲများကို Ultra-အစာရှောင်ခြင်းထပ်တူပြုခြင်းနှင့်အပြောင်းအရွှေ့နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်အထိရောက်ဆုံးကွန်ယက်ကိုအသုံးချမှုမှတဆင့်ကူးစက်သောဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်စီမံကိန်းကို pre-analytics ။
Project မှကားရပ်ရန်နှင့် Workspace ကို Tools များအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာရန်, ဧပြီလ NAB မှာတဲ SL14816 အပေါ် Marquis အသံလွှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ အဲဒီမှာအလည်အပတ်ခရီးအစည်းအဝေးတစ်ခုစီစဉ်ဖို့ marquisbroadcast.com/nab။ သင်တို့သည်လည်းမှာ Marquis အသံလွှင့်က်ဘ်ဆိုက်မှခေါင်းနိုင်ပါတယ် www.marquisbroadcast.com.
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Marquis Post-ထုတ်လုပ်မှု, ဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု, Cloud workflow နှင့်ကြီးမားသောရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်း middleware ပေါင်းစည်းမှုများအတွက် apps များအပါအဝင်လှည်ပေါင်းစည်းမှုလုပ်ဆောင်မှအထူးကု software ကိုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ၎င်း၏ဖောက်သည် Warner Bros နှင့် Dream Works ရုပ်ရှင်အပါအဝင်ကြီးတွေစတူဒီယို, ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်သော CBS နှင့်ဘီဘီစီအဖြစ်ထုတ်လွှင့်အပါအဝင်အကြီးစားဝန်ဆောင်မှုပေးကနေအထိ Ericsson က လက်ျာဘက်မှတစ်ဆင့်နှင့် Telefonica, ထိုကဲ့သို့သောငြူစူခြင်းနှင့် The လယ်ယာအုပ်စုအဖြစ်အိမ်များ post များနှင့်နောက်ဆုံးတော့ဖန်တီးမှုတစ်ဦးချင်းစီ၏များစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာဖို့ရန်။ အများဆုံးအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းကစားသမားအများအပြား OEM ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာနှင့်အတူ Marquis မိတ်ဖက်။ Marquis အသံလွှင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် လွန်စွာလိုလားသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအချက်အလက်များ၏ 60 Petabytes ကျော်စီမံခန့်ခွဲနေကြရသော၎င်း၏စီမံကိန်းကားရပ်ရန်နှင့် Workspace ကို Tools များနှင့်အတူလက်မှတ်ရမဟာမိတ်အဖွဲ့ Partner ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုအဘို့, Liz ကော့, Brill မီဒီယာ (ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်[အီးမေးလျ protected], T-: + 44 7981 472844) သို့မဟုတ်မှာ Marquis အသံလွှင့်က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု www.marquisbroadcast.com။ သင်တို့သည်လည်း၎င်း၏လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာများပေါ်တွင် Marquis အသံလွှင့်လိုကျလြှောကျနိုငျ Facebook က နှင့် တွစ်တာ.
Marquis Broadcasting သည်စီးပွားရေးအတွက်အရေးပါသောပေါင်းစည်းမှုဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးပွားစေသည် - မေလ 5, 2020
Sinclair Broadcasting Group သည် Marquis Broadcast ထုတ်လုပ်မှုသိုလှောင်မှုအကောင်းဆုံးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန် - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2020
MelroseINC ကို Elite Reseller အဖြစ် Marquis Broadcasting မှရွေးချယ်သည် - အောက်တိုဘာလ 10, 2019
လွန်စွာလိုလားသော အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor Marquis အသံလွှင့် မီဒီယာ မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု တိုင် post ကိုထုတ်လုပ်မှု Project မှကားရပ်ရန် SJGolden - လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality လုပ်ငန်းအသွားအလာ Workspace ကို Tools များ 2019-04-05
ယခင်: Marquis အသံလွှင့်ထံမှ Medway Workflows ပေါင်းစည်းမှုရိုးရှင်း
နောက်တစ်ခု: ENCO enTranslate Automated, တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်စာပေနှင့်စာတန်းထိုးစနစ်စတင်